Quebec ee Kanada ayaa soo bandhigtay canshuur cusub oo loogu talagalay dadka aan la tallaalin
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kanada » Quebec ee Kanada ayaa soo bandhigtay canshuur cusub oo loogu talagalay dadka aan la tallaalin
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Madaxa gobolka Kanada ee Quebec, François Legault
Iyada oo cusbitaallada COVID-19 ay kor u kacayaan iyada oo si degdeg ah uu u faafayo kala duwanaanshaha Omicron, Quebec waxay u baahan doontaa 1,000 shaqaale cusbitaal oo dheeraad ah iyo 1,500 shaqaale guri kalkaalis ah dhawrka toddobaad ee soo socda, ayuu yidhi Legault.
Guddoomiyaha Gobolka Quebec ee Kanada, Francois Legault, maanta waxay wacad ku martay in ay dhaqan galin doonto ganaax lacageed oo cusub, isaga oo sheegay in kuwa Québécois ee diida in ay helaan talaalka ugu horeeya todobaadyada soo socda ay tahay in ay bilaabaan lacag bixinta saamaynta ay ku leeyihiin nidaamka daryeelka caafimaadka.
"Hadda, sidoo kale waa su'aal ku saabsan caddaaladda 90% dadweynaha kuwaas oo wax u huray," Sharci ayuu yidhi. "Waxay ila tahay in aanu ku leenahay qiyaastan oo kale."
Ka mamnuucida anti-vaxxers-ka aan xidhnayn inay soo galaan dukaamada khamriga iyo dukaamada xashiishadda, Quebec waxay daaha ka qaadaysaa canshuur caafimaad oo cusub oo loogu talagalay kuwa diida in laga tallaalo coronavirus.
Mar wax laga weydiiyay caqabadaha dhanka sharciga iyo anshaxa ee ay u badan tahay in dowladdu ay la kulmi doonto canshuuraha aan horay loo arag, Ra’iisul Wasaaraha ayaa qiray in tallabadaasi ay tahay “wax weyn”.
Sharci Wuxuu yiri: "Haddii aad eegto waxa ka dhacaya waddamo kale ama dowlado kale, qof kastaa wuxuu isku dayaa inuu xal u helo. Waa su'aal ku saabsan sinnaanta, sababtoo ah hadda, dadkani, waxay saareen culeys aad u muhiim ah shabakadeena daryeelka caafimaadka, waxaanan u maleynayaa inay caadi tahay in dadka intiisa badan ay weydiiyaan in ay jirto cawaaqib."
Quebec Ra'iisul Wasaaraha ma uusan shaacin tirada canshuurta cusub. Wuxuu sheegay in gobolku uu sii wadi doono ballaarinta codsiga shuruudaha baasaboorka tallaalka ee gobolka, laakiin wuxuu ku dooday "waa inaan sii wadnaa" intii aan ka mamnuucnay dadka deggan aan laga tallaalin meelaha dadweynaha.
Waajibaadka baasaboorka ayaa lagu kordhiyay dukaamada khamriga iyo xashiishadda todobaadkii hore ka dib markii hore loogu amray in la galo goobaha sida makhaayadaha, tiyaatarada, baararka iyo casinos.
Iyada oo cusbitaallada COVID-19 ay kor u kacayaan iyada oo ay jirto faafitaan degdeg ah oo kala duwanaanshaha Omicron, Quebec waxay u baahan doontaa 1,000 shaqaale cusbitaal oo dheeraad ah iyo 1,500 shaqaale guri kalkaalin ah dhawrka toddobaad ee soo socda, ayuu yidhi Legault.
Quebec ayaa soo sheegay 62 dhimasho ah oo COVID-19 ah Talaadadii, waana tii ugu badneyd tan iyo Janaayo 2021, ka hor inta aan la faafin tallaalka gobolka si xawli ah.
Akex Semiletow wuxuu leeyahay,
Janaayo 12, 2022 markay tahay 14:15
Way fiican tahay in la arko siyaasi calooshiisa ku habboon. Caddaaladdu waxay u shaqaysaa siyaalo kale, qofku xorriyaddiisuna waxay ku dhammaanaysaa halka ay ka bilowdo ka-hortagga arrimaha qofka kale…